आधुनिक कृषिको यान्त्रिकीकरण सम्भावना र अवसर | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर आधुनिक कृषिको यान्त्रिकीकरण सम्भावना र अवसर
on: ३० भाद्र २०७४, शुक्रबार १५:२२ अर्थान्तर
वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत
नवीन शर्माको जन्म विसं २०३० पुस ५ गते बाग्लुङ जिल्लामा भएको हो । उनले २०५२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर चितवनबाट बीएससी एजी पास गरेका छन् । २०६५ सालमा नेदरल्याण्डको वागिनइञ्जिन विश्वविद्यालयबाट एमएससी र २०७२ सालमा ताइवानको नेशनल चुङसिङ विश्वविद्यालयबाट बालीरोग विज्ञान विषयमा विधावारिधि गरेका छन् । २०५४ मा नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयमा बाली संरक्षण अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी कृषि विकास मन्त्रायलअन्तर्गत व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयमा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।
सामान्यतया विषादी भन्नाले बालीनाली, पशुपक्षी, मानवलगायत अन्य जीवित प्राणीका शत्रु जीवहरूलाई नाश वा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने विषयुक्त ठोस वा तरल पदार्थलाई जनाउँछ । नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश विषादी केही अपवाद एवम् दुरुपयोगलाई छाडेर बालीनालीका शत्रु जीवहरू जस्तै : रोगका कीटाणु र कीराहरूको नियन्त्रणका लागि नै प्रयोग गरिन्छ । झण्डै ६ दशक लामो विषादी प्रयोगको इतिहास भएको नेपालमा पहिलोपटक सन् १९५५ मा अमेरिकाबाट पेरिस ग्रीन, गामाक्जोन र निकोटिन सल्फेट नामका विषादीहरू भित्र्याइएको थियो भने सन् १९५६ मा मलेरिया नियन्त्रणका लागि डीडीटी नामक विषादी प्रयोगमा ल्याइएको थियो । अध्ययनअनुसार बालीनालीमा शत्रु जीवको माध्यमद्वारा उत्पादनपूर्व र पश्चात् गरेर सम्पूर्ण उत्पादनको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुन्छ । यसरी हुने नोक्सानीको मात्रा नियन्त्रण वा कमी गर्न सकेमा यसले खाद्यसुरक्षामा समेत मदत पुर्यातउन सक्छ । नेपालमा बालीनालीमा विषादीको प्रत्यक्ष प्रयोग सन् १९६० को दशकमा कृषि विभागको स्थापना भएपछि शुरू भएको हो । यथार्थमा नेपालमा विषादी प्रयोगको आधिकारिक र व्यवस्थित अध्ययन भएकै छैन । जति पनि विषादी प्रयोगसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू प्रकाशित भएका छन्, तिनीहरू सामूहिक समीक्षा नभई अनुसन्धानकर्ताको एकोहोरो दाबीमा मात्र आधारित छन् । लामो समयसम्म नेपालमा विषादीको औसत प्रयोग १ सय ४१ ग्राम खास तत्त्व प्रतिहेक्टर रहेको तथ्याङ्क उपलब्ध थियो भने पछिल्लो समयमा एक अध्ययनले ३ सय ९६ ग्राम खास तत्त्व प्रतिहेक्टर रहेको देखाएको छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा विषादीको प्रयोगको मात्रालाइ लिएर खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन । तर, समस्या के छ भने यो औसत तथ्याङ्क हो । जहाँ विषादी प्रयोग भएको छ, त्यहाँ अत्यन्त धेरै भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा चियामा २ हजार १ सय, कपासमा २ हजार ५ सय ६० र तरकारीमा १ हजार ६ सय ५ ग्राम खास तŒव प्रतिहेक्टर प्रयोग भएको देखिन्छ, जुन अधिक प्रयोग हो । विषादी प्रयोगको अर्को डरलाग्दो पक्ष के हो भने यसको प्रयोग अत्यन्त अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक तरीकाले भइरहेको छ । यसका कारण प्रयोगकर्ता स्वयम् र उपभोक्ता दुवै यसको जोखीममा परेका छन् । विषादीको समुचित प्रयोगका लागि सचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ देखि १० सम्म विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह मनाउँदै आएको छ । नेपालमा हालसम्म विभिन्न किसिमका गरी २ हजार २ सय ७५ ओटा व्यापारिक नामसहितका विषादी दर्ता भएका छन् भने पहिले प्रयोगमा रहेका १५ किसिमका विषादीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालमा करीब १ हजार ६ सय ५० मेट्रिक टन विभिन्न किसिमका विषादीको आयात तथा संश्लेषण गरेको तथ्याङ्क छ ।
उपभोक्तामा पर्ने असर भनेको विषादीको प्रयोगपश्चात् उत्पादनमा रहने अवशेष नै हो । यसको असर कम गर्न हरेक विषादीको प्रयोगपश्चात् बाली टिप्न पर्खनुपर्ने समयको पालना नै हो । यसका लागि मुख्यतः उत्पादक नै जिम्मेवार हुन्छ र उसले विषादी प्रयोगपश्चात् पर्खनुपर्ने समयको पालना इमानदारीपूर्वक गरिदिए मात्र जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । उत्पादनमा विषादीको अवशेषको मात्राको मापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण सेवाको शुरुआत गरेको छ । तर, त्यो सुविधा तरकारी र फलफूलमा प्रयोग हुने र नेपालमा उपलब्ध सबै किसिमका विषादीको परीक्षण गर्न पर्याप्त छैन । सरकारले यस परीक्षणको दायरा फराकिलो गर्दै उपत्यकाका अन्य स्थानहरू र देशभरमै सञ्चालन गर्ने योजनाको घोषणा गरे पनि सो घोषणाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोग, भण्डारण र विसर्जनले माटो, पानीका मुहानहरू र वातावरण दूषित हुन गई सम्पूर्ण प्राणीजगत्लाई नै असर पर्न जान्छ ।
विषादीको सुरक्षित प्रयोगका लागि सरकारले जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८, नियमावली, २०५० र विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजतपत्र, सुरक्षित विक्रीवितरण, भण्डारण एवम् प्रयोग सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ मार्फत यसको नियमन गर्न प्रयासरत रहेको छ । सरकारी प्रयास हुँदाहुँदै पनि विषादीको सुरक्षित प्रयोग अझै पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । अत्यन्त हानिकारक विषादीहरूको प्रयोगमा क्रमशः प्रतिबन्ध लगाउँदै जानु, प्रतिबन्धित विषादीको गैरकानूनी आयात र प्रयोगमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु र वैकल्पिक जैविक विषादीहरूको सहज उपलब्ध गराउनु विषादी र त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारका सामु मुख्य चुनौती हुन् ।
पशुपन्छी पालनमा यान्त्रिकीकरणले लाभैलाभ
सचिव, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशुपन्छीका क्षेत्रमा के के गर्दै छ ?
पशुपालन व्यवसायले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान राखी एउटा दरिलो तथा आशालाग्दो पेशा व्यवसायको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्दै विकास तथा विस्तार गर्न नेपाल सरकारले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना गरेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयको साझा छाताभित्र रहँदा पशुपालन क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्या्एको योगदानको सही मूल्याङ्कन भएको थिएन । हामीले यस मन्त्रालयको स्थापनासँगै पशुपालन तथा यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममार्फत पशुपालक कृषक, व्यवसायीलाई सहज तथा सरल रूपमा सेवा पु¥याउन खोजेका छौं । हाम्रा प्रयासलाई मुख्यतया दूध, फूल तथा मासुको क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रित गरेका छौं । मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूले कृषकका समस्याको समयमा नै समाधान, पशुरोग तथा महामारीको नियन्त्रण, नश्ल सुधार, पोषण सुधार, बजार विकास तथा विस्तारलगायत कार्य प्रमुख रूपमा गरेका छन् । पशुपालक कृषक समूह तथा सहकारीको विकास गरी सीमान्तकृत कृषकको क्षमता विकास गरी व्यावसायिकताको विकासमा मन्त्रालय अघि बढेको छ ।
नेपाल पशुपन्छीका लागि कत्तिको उपयुक्त स्थान हो वा होइन ?
नेपाल प्राकृतिक रूपमा धनी देश हो । हामी गरीब मुलुक भए पनि प्रकृतिले हामीलाई धेरै अवसर दिएको छ । हामीकहाँ भएका हिमाल, पहाड तथा तराईक्षेत्र विभिन्न प्रकारका पशुपन्छी पालनका लागि उपयुक्त छ । प्राकृतिक विविधताका कारण हामीकहाँ हिमाली याक, नाक, चौंरी, भेडा, च्याङ्ग्रादेखि पहाडी गाई, स्थानीय जातका खसीबोका, कुखुरा, तराई बाख्रा, बङ्गुर, भैंसीलगायत घरपालुवा पशुबस्तु र अन्य विभिन्न जङ्गली जनावरसमेत सबै क्षेत्रमा छरिएर रहेको पाइन्छ । संसारमा विरलै यस्ता मुलुक छन् जहाँ हामीसँग जस्तो जैविक विविधता रहेको छ । हामीले गर्व गर्न सक्छौं, प्रकृतिले साथ दिएकैले यी पशुबस्तुका लागि आवश्यक घाँस, पराललगायत वस्तुमा समेत हामीकहाँ विविधता छ । यहाँको मौसममा घाँसखेती सहजरूपमा गर्न सकिन्छ । तसर्थ हामीले यस विविधताको समुचित प्रयोग गरी पशुपालनका क्षेत्रमा नेपाललाई नमूनाको रूपमा चिनाउने अवसर रहेको छ ।
नेपाल पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर हुन कति समय लाग्ला ?
हामीले लिएको लक्ष्यमा पशुबस्तुको महामारीलगायत विपत् नभएमा हामी ३ वर्षभित्रमा अण्डा, मासु तथा दूधमा आत्मनिर्भर हुनेछौं । हामीले यसमा थप के बुझ्न जरुरी छ भने देशको जनसङ्ख्या तथा क्रयशक्तिमा भएको वृद्धिका कारण पशुजन्य वस्तुको माग धेरै बढ्ने हामी सहज अनुमान गर्न सक्छौं । यस कारण आत्मनिर्भरको कुरा गर्दा हामीले न्यूनतम आवश्यकताको कुरा गरेका हौं, यो प्राप्त भएपश्चात् हामी हाम्रा थप आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै निकासीका लागि समेत प्रयत्न गर्नेछौं ।
पशुपन्छी पालन गर्न इच्छुक युवा, किसानलाई कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई हेर्नुभयो भने अधिकांश पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षित भएको पाउनुहुन्छ । उहाँहरूले त विदेशमा देखेर र भोगेरसमेत आउनुभएको छ । यस क्षेत्रमा लाग्नेहरूको भविष्य एकदमै राम्रो छ । हामीले थोरै यन्त्रीकरण तथा व्यवसायीकरणतर्फ पाइला चाल्नासाथ यो व्यवसाय अन्य पेशा व्यवसायलाई पछाडि पार्दै अगाडि बढ्न सक्छ । साथै जीवित वस्तुको व्यवसाय भएकाले व्यवसायको सुरक्षाका लागि बीमातर्फ समेत ध्यान दिन अनुरोध गर्छु । नेपालले भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, भारतबाट दूध र मासुजन्य वस्तु आयात हुन्छ ।
भारतले कृषिमा अनुदान दिएका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
निश्चय नै भारतीय बजार ठूलो छ । हामीले अहिले केही पशु, पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्री भारतबाट आयातसमेत गरिरहेका छौं । तर, यसको अर्थ यो होइन कि हामी सम्पूर्ण रूपमा परनिर्भर छौं । तपाईंले हेर्नुभयो भने हामी कुखुराको मासु तथा अण्डाका लागि स्वदेशी उत्पादनमा पूर्ण निर्भर छौं । हो, वर्षका केही महीना हामी दूध आयात गर्छौं तथा मासुका लागि राँगा तथा खसीबोका आयात गर्छौं । यो एक प्रकारले भन्दा हाम्रो उत्पादन पूर्ण व्यावसायिक नभएर भएको हो । अब विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भइसकेपछि हामीलाई प्राप्त सम्भावना तथा चुनौतीको उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । उत्पादन लागत कम गराउन सके हाम्रा उत्पादन अरूभन्दा प्रतिस्पर्धी भई कृषकलाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने देखिन्छ । साथै हाम्र्रा दुवै छिमेकी मुलुकको बढ्दो जनसङ्ख्या समेत हाम्र्रा लागि अवसरका रूपमा आउन सक्छ । त्यसैले हामीले यसलाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
दशैंका लागि चाहिने खसीबोका कहाँबाट कसरी आयात हुँदै छ ?
दशैंका लागि आवश्यक अधिकांश खसीबोका देशका विभिन्न भागबाट आयात हुने गरेको छ । विशेषतः बाख्राको पकेटका रूपमा अघि बढेका जिल्ला मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, उदयपुर, सुर्खेत, दैलेख, धादिङ, नुवाकोट, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, डोटी, कैलालीलगायत देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौंलगायत शहरमा आयात हुनेछन् । मुस्ताङलगायत पहाडी क्षेत्रबाट च्याङ्ग्रसमेत आयात हुनेछ । दशैं नेपालीहरूको ठूलो चाड भएको र हाम्र्रो आवश्यकता एकैपटक बढी हुने भएकाले नपुग खसीबोका भारतबाट समेत आयात हुनेछ । यसपालिको दशैंतिहारमा नेपालमा मासुको अभाव हुनेछैन ।
कस्ता रोग लागेका पशुपन्छीको मासु सेवनबाट मानिसमा रोग लाग्ने सम्भावना रहन्छ र बच्ने तरीकाहरू के के छन् ?
पशुबस्तुका धेरै रोग मानिसलाई समेत सर्न सक्ने किसिमको हुन्छ । हामीले सकेसम्म पशुपन्छीको मासु खाँदा स्वस्थ पशुपन्छीबाट उत्पादन भएको मासु सेवन गर्नुपर्छ । दशैंमा हामीले मासु एकैपटक पकाएर लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने चलन छ । गर्मी स्थानमा यसरी राख्दा मासु बिग्रने तथा यसको सेवनले झाडाबान्तालगायत समस्या देखिन सक्छ । पशुका विभिन्न किसिमका जुकाहरू सर्न सक्छन् । ब्रुसेलोसिस, एनथ्रेक्स, लेप्टोस्पाइरोसिस, लिष्टेरिया, टोक्सोप्लाज्मा, साल्मोनेलालगायत धेरै रोग मासुका कारण सर्न सक्ने हुँदा भेटेरिनरी डाक्टरबाट परीक्षण भएका पशुवस्तुको मासु सेवन गर्न उपयुक्त हुन्छ । मन्त्रालयले समेत यसको सुनिश्चित गराउन देशभर आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरेको छ । साथै उपत्यकामा समेत टोली बनाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि खटाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सबैभन्दा जरुरी कुरा उपभोक्ता स्वयम् सचेत हुन जरुरी छ । आफूले खरीद गर्न लागेको पशुको स्वास्थ्य परीक्षण भए नभएको यकिन गरी राम्ररी पकाएर चिसो वा फ्रिजमा सुरक्षित राखेर मासु सेवन ग¥यौं भने हामी स्वस्थ भई चाड राम्ररी मनाउन पाउँछौं ।
पशुपन्छी पाल्न इच्छुक कृषकले कहाँबाट धेरै विषय बुझ्न सक्छन् ?
पशुपन्छी पाल्न इच्छुक कृृषकले धेरै कुरा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ । हाम्रा जिल्लास्थित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरू, क्षेत्रीय पशु सेवा कार्यालय, प्रयोगशाला, कार्यक्रम निर्देशनालयलगायत पशुसेवा विभागबाट समेत कृषकहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ । यसबाहेक विभिन्न आयोजना, कलेज, विश्वविद्यालयबाट समेत जानकारी पाउन सकिन्छ । हामीकहाँ तालीम लिई देशभर कार्यरत पशुसेवामा लागेका विशेषज्ञ तथा प्राविधिक साथीहरूबाट समेत कृषकहरूले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ । यसबाहेक मन्त्रालय तथा अन्तर्गतबाट प्रकाशन भएका विभिन्न पुस्तक तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन गरेर पनि कृषकहरूले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ । हामी कृषकहरूले सिक्न चाहेका विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउन सधैं तयार छौं ।
पशुपन्छीलाई हाइब्रिड बनाउने प्रक्रिया र अनुसन्धान सम्बन्धमा नेपालमा के भइरहेको छ ?
पशुपन्छीमा हाइब्रिड त्यति धेरै प्रयोग हुने शब्द होइन । हामी यसलाई नश्ल सुधार भन्छौं । हामीकहाँ भएका कम उत्पादन क्षमताका पशुबस्तुमा उच्च क्षमताका पशुबस्तुको वीर्य वा साँढे वा बोका आदि प्रयोग गरी क्रमशः नश्लमा सुधार गर्ने कार्य हामीले विगतदेखि नै गर्दै आएका छौं । विगत केही वर्षदेखि हामीले यसलार्ई मिशनका रूपमा विस्तार गरेका छौं । यसमा हामीले विदेशबाट भ्रूण, सेक्स सिमेन, उन्नत साँढेको सिमेन, उन्नत नश्लका पशुबस्तुसमेत आयात गरेर देशमा नश्ल सुधारका लागि कार्य गरेका छौं । यसका अलावा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा पशु चिकित्सा अध्ययापन हुने कलेज तथा विश्वविद्यालयमा समेत यसबारे अध्ययन अनुसन्धानका कार्य नेपालमा भइरहेको छ । हामी यसरी अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त नतीजालाई कृषकको पहुँचमा पुर्या्उनसमेत लागिपरेका छौं ।
निष्कर्षमा केही भन्नुहुन्छ कि ?
नेपालमा पशुपालन क्षेत्रले यथोचित लगानी नपाए पनि कृषकको माया तथा देशको आवश्यकताले यो क्षेत्र समग्र कृषिसँग तुलना गर्दा अर्थतन्त्रमा लगभग कृषिक्षेत्र समान योगदान दिने अवस्थामा पुगेको छ । हामीले पशुपालन क्षेत्रमा पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य, नश्ल सुधार, पशु पोषण सुधार, बजार विकास तथा विस्तारमा गरेका कार्यलाई अझ फराकिलो बनाउनुपरेको छ । देश सङ्घीयतामा गएको सन्दर्भमा मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै कार्य अब स्थानीय सरकारबाट हुने भएको छ । यसमा सबै कृषक चनाखो भई स्थानीय सरकारका कार्यक्रममा यस क्षेत्रको समुचित विकासका लागि कार्यक्रम तथा बजेट छुट्याउन लगाउनु जरुरी छ । साथै मन्त्रालय कृषकहरूको समस्या समाधानका लागि जहिले पनि तयार रहने कुरासमेत म तपाईंको मिडियामार्फत सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
कृषि विकास रणनीतिलाई नयाँ सरंचनाअनुसार परिर्वतन जरुरी
कार्यक्रम प्रबन्धक, कृषि तथा ग्रामीण विकास (जाइका नेपाल)
जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाइका)ले नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासमा केकस्ता काम गरिरहेको छ ?
जाइकाले नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासका लागि सन् १९७० देखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । शुरूमा जाइकाले नेपालमा कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने कार्यमा आफ्ना कार्यक्रम केन्द्रित गर्योर । त्यसपछि विस्तारै उच्च मूल्यका बाली उत्पादन गर्ने र व्यावसायिक खेतीतर्फ किसानहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने, बजारको मागअनुसार तरकारी बाली उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आफ्ना कार्यक्रम केन्द्रित पनि गरेको छ । यही क्रममा जाइकाले विभिन्न परियोजना जस्तै, जनकपुर कृषि विकास कार्यक्रम, बागवानी विकास कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम, रेशम खेती परियोजना, चिया विकास कार्यक्रम, कृषि तालीम तथा प्रसार सुधार कार्यक्रम, सिन्धुली सडक खण्ड व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धन आयोजना, एक गाउँ एक उत्पादनजस्ता कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । सयौं जापानी स्वयंसेवकमार्फत विभिन्न जिल्लामा कृषि तथा पशुसेवा विकास कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपाललाई कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन के के गर्नुपर्ला ?
नेपाललाई कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल सरकारले तयार गरेको कृषि विकास रणनीतिलाई नयाँ सरंचनाअनुसार परिमार्जन गरी लागू गर्नुपर्छ । साथै स्थानीय सरकार र कृषि प्रसार कार्यकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । नेपालमा कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने जति पनि दातृ निकाय, अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था छन् ती सबैले नेपाल सरकारले ल्याएको कृषि विकास रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउने किसिमका कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाहेक कृषि मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारले कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला सङ्घसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु अर्को महŒवपूर्ण आवश्यक पक्ष हो । आवश्यक पूर्वाधारको विकास, दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त योजनाको निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपाललाई कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । यसका लागि जाइका नेपालले पनि आफ्ना कार्यक्रम कृषि विकास रणनीतिअनुसार नै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
जाइकाले कृषिका कुनकुन क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ र आउँदा दिनमा कस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने योजना राखेको छ ? यसले कृषिक्षेत्रमा गरेकोे सहयोगले नेपालको गरीबी निवारणमा कसरी योगदान पुर्यामएको छ ?
गरीबी निवारण आफैमा नेपालका लागि एक ठूलो लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न विभिन्न क्षेत्रले योगदान गरेका छन् । त्यसमध्ये कृषिक्षेत्र पनि प्रमुख एक हो । जाइकाले नेपालमा सन् १९७० को दशकदेखि नै गरीबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रममा लगानी गर्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरेबमोजिम मत्स्य विकास, बागवानी विकास तथा जुनार खेतीको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै नेपालमा रेम्बो ट्राउट माछा, स्ट्रवेरी (भुइँकाफल) तथा किवीखेती भिœयाउने काम गरेको छ । नेपालमा उच्च मूल्यका बालीहरूको उत्पादन र बजारीकरण गर्न गुरुयोजना निर्माण गरेको छ भने त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ । यसअतिरिक्त नेपालमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन गर्दै आएको छ । मल, बीउ तथा साना सिँचाइ कार्यक्रममा सहयोग गर्न क्यानेडियन राउण्ड २ कोष तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने क्यानेडियन राउण्ड १ कोष कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको छ । जाइकाले निकट भविष्यमा नै तराईक्षेत्रमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणाली प्रवद्र्धनका लागि सञ्चालन तथा सम्भार कार्यक्रमसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
यी विभिन्न कार्यक्रममार्फत नेपाली किसानहरू विस्तारै निर्वाहमुखी खेतीप्रणालीबाट व्यावसायिक खेतीप्रणालीतर्फ अग्रसर हुँदै गएको, परम्परागत कृषिप्रणालीबाट विस्तारै आधुनिक कृषिप्रणालीतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ । यसले गर्दा किसानको जीवनस्तरमा सुधार हुँदै भएको छ भने उनीहरू आत्मनिर्भर पनि बन्दै गएको पाइन्छ ।
नेपालमा सामान्य प्रकृतिका कृषिजन्य वस्तुहरू पनि बाह्य मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ?
व्यावसायिक कृषिप्रणालीको प्रवद्र्धन नै सामान्य प्रकृतिका कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई विस्थापित अथवा निरुत्साहित गर्ने प्रमुख उपाय हो । यसका लागि सरकारले विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम आफ्ना नीति र कार्यक्रममार्फत ल्याउनु जरुरी हुन्छ ।
विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमै कृषिक्षेत्रमा कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ?
कृषि व्यवसायलाई नै धितो राखी सर्वसुलभ र सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक उपर्युक्त तालीम उपलब्ध गराउने सरल सरकारी पद्धतिको विकास हुनु जरुरी छ । सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रम जस्तै, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कृषिबीमा कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमको व्यापक प्रचारप्रसार तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै दक्ष र अनुभवी विज्ञहरूको सहज उपलब्धताले पनि युवालाई नेपालमै बसेर केही गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्छ । यसले गर्दा युवा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित हुन सक्छन् । झन्झटिलो र समय बढी लिने प्रक्रियाले युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित नगर्न सक्छ ।
जाइका नेपाल नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासका लागि हिजो पनि एउटा प्रमुख साझेदार दातृ संस्थाको रूपमा सक्रिय थियो, आज पनि छ । आउने दिनमा पनि नेपाल सरकारले ल्याएका कृषि विकास रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न परियोजनामार्फत नेपाली कृषि प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा नयाँ कृषिप्रविधिको विकासमा सधैं सहयोगीका रूपमा काम गर्नेछ ।